Kedu ka esi emeso nkwonkwo ikpere? Nkwadebe, tinctures, decoctions, ointments
Mgbu ikpere na-akpata na ọgwụgwọ
Onye ọ bụla nke abụọ bi na mbara ala anyị nwere ihe mgbu na ikpere ọ dịkarịa ala otu ugboro na ndụ ha, n'agbanyeghị afọ na ọrụ. Njikọ ikpere na-egbu mgbu na-akpata ọtụtụ nsogbu na ndụ kwa ụbọchị. Enweghị ike ịmegharị ahụ nkịtị, isi ike nke mmegharị ahụ, nkwụsị ụkwụ na-eme ka onye ọrịa ghara inwe ọṅụ nke nnwere onwe.
Usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị na nke oge a ga-enyere aka kpochapụ nkwonkwo nke pathology ma weghachite anụ ahụ mebiri emebi na ọkwa cellular. Iji nweta nsonaazụ mgbake ngwa ngwa, ọ dị mkpa iji chọpụta ọrịa ahụ n'ụzọ ziri ezi, nke si na ya pụta bụ ihe mgbu na nkwonkwo ikpere.
Gịnị kpatara ikpere ji afụ ụfụ?
Arịrịọ na-arịọ onye dọkịta ọkpụkpụ tozuru oke na-ekwe nkwa nchọpụta na nguzobe ihe kpatara mgbaàmà a.
Ndị dọkịta na-ekwu na ọrịa mgbu nwere ike ịpụta n'ihi mbibi nke anụ ahụ nkwonkwo n'oge trauma, mgbanwe degenerative ma ọ bụ usoro mkpali. Ebumnuche nke ọgwụgwọ maka nkwonkwo ikpere na-adabere kpọmkwem na ihe kpatara ya na ịdị njọ nke pathology.
Ihe kpatara ya nwere ike ime:
mmerụ ahụ na-emerụ ahụ nke ọdịdị dị iche iche: ọnyá, nkwụsịtụ, sprains, mgbaji;
arthrosis nke nkwonkwo ikpere - mgbanwe na-emebi emebi na anụ ahụ articular, na-akpata nrụrụ na ọnwụ nke ọrụ;
ogbu na nkwonkwo - mkpali usoro nke nnukwu na-adịghị ala ala ọdịdị;
usoro mbibi n'oge mgbanwe ndị metụtara afọ;
bursitis - mbufụt nke akpa synovial;
mmụba nke ibu na ikpere n'ihu oke ibu na ọrịa metabolic na ahụ;
pathologies nke mmalite autoimmune;
mgbanwe congenital na nhazi nke nkwonkwo;
Ọrịa Osgood-Spatter - ọdịdị nke ọzịza na-egbu mgbu na mpaghara patella, na-apụta na ndị nọ n'afọ iri na ụma na-arụsi ọrụ ike na egwuregwu n'oge mgbanwe mgbanwe nke hormonal na ahụ, ọtụtụ mgbe ọgwụgwọ nke nkwonkwo ikpere adịghị mkpa. , pathology na-edozi onwe ya;
osteomyelitis - ọnya na-efe efe nke nkwonkwo site na Staphylococcus aureus, na-eme ka mmanya na-egbu onye ọrịa n'ozuzu ya;
dissecting osteochondritis - mbibi nke cartilage na-esote nkebi nke kewara ekewa n'ime oghere articular;
ọrịa akwara ozi metụtara mmebi akwara;
Onye ọkachamara ahụike na-agwọ ọrịa nkwonkwo nwere ike ịmata ọdịiche dị na pathology ma họrọ otu ọgwụgwọ maka nkwonkwo ikpere maka onye ọrịa. Nlekọta onwe onye nke analgesics na-ewepụ obere ihe mgbu, ma ọ nweghị mmetụta ọgwụgwọ na ọrịa ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị dị elu nwere ike ịkpata nsonaazụ dị mwute: nkwụsị nke nkwonkwo nkwonkwo, mkpa maka ịwa ahụ na usoro nhazigharị dị mgbagwoju anya.
Otu esi emeso nkwonkwo ikpere
Na ọdịdị nke usoro mgbu na ikpere, ọ dị mkpa ịhụ dọkịta ozugbo enwere ike. Ụdị ọrịa na-adịghị mgbagwoju anya nke nwere ike ime ka mgbaàmà yiri nke ahụ na-agwọta nke ọma ruo mgbe arụ ọrụ ikpere na-eweghachi nke ọma.
N'ọnọdụ ndị siri ike, dịka ọmụmaatụ, na meniscus adọwara adọwa, ọbụlagodi obere igbu oge na-eduga na nsonaazụ dị mwute, ruo nkwarụ.
Ọgwụgwọ ikpere n'ụzọ ọdịnala site n'enyemaka nke ọgwụ na-ekpebi site na dọkịta na-aga: ndị a nwere ike ịbụ ọgwụ maka nchịkwa ọnụ, intramuscular na intraarticular injections, ointments na gels maka ngwa ngwa.
Usoro ọgwụgwọ maka ọgwụgwọ nkwonkwo ikpere bụ ngwọta zuru oke:
Symptomatic mkpochapụ nke mgbu mgbu;
mkpochapu ihe kpatara pathology;
Nhọpụta nke ọgwụ mgbochi mkpali na-abụghị nke steroid dị mkpa maka iwepụ ihe mgbu na mmeghachi omume mkpali nwere ike ime. Enwere ike iji ha ma n'ụdị ointments maka iji mpụga, na n'ụdị injection. Dọkịta na-ekpebi ọgwụ ahụ ozugbo maka otu ikpe, iji NSAID na-enweghị ndenye ọgwụ nwere ike ịdị ize ndụ n'ihi ọnụọgụ dị ukwuu nke mmetụta.
N'otu aka ahụ na iji anestetiiki, orthopedist na-ahọrọ ọgwụ ndị ga-ewepụ ihe kpatara mgbu:
ọ bụrụ na ọ bụrụ mmerụ ahụ, a na-etinye ihe nkedo ma ọ bụ akwa akwa akwa, a na-atụ aro ka ị na-agbaso usoro orthopedic ma belata ọrụ moto maka mgbake;
na ogbu na nkwonkwo, bursitis - ọgwụ mgbochi mkpali;
arthrosis, mgbanwe mgbanwe - ọgwụ ndị nwere ike iweghachi anụ ahụ mebiri emebi;
oke ibu, ọgwụgwọ nri;
nkwụsị nke pathogen na ọnya na-efe efe
ọgwụgwọ ịwa ahụ maka neoplasms.
Mgbe mwepụ nke nnukwu oge nke pathology, ọ dị mkpa iji mee ihe iji weghachite sel na ọrụ nke nkwonkwo ikpere.
Chondoprotectors bụ otu ọgwụ ọgwụ nwere ike iweghachi anụ ahụ nkwonkwo mebiri emebi.
Physiotherapy na ọgwụgwọ mmega ahụ
Usoro ọgwụgwọ physiotherapy na-arụ ọrụ dị mkpa na ngwa ngwa iwepụ ihe mgbu na ikpere. Magnetotherapy, iji ultrasound, hydrogen sulfide na radon bath, nhọpụta nke radieshon infrared na-ebelata mkpa ọ dị ịkọwapụta ọtụtụ ọgwụ ọgwụ.
Mmega ahụ ọgwụgwọ bụ usoro mmega ahụ ezubere iji weghachi ọrụ moto zuru oke nke ikpere. Ekwesịrị ịme mmega ahụ ọgwụgwọ na doses n'okpuru nlekọta nke dọkịta, na physiotherapist na-etinye aka n'ịchịkọta usoro ọgwụgwọ, na-eburu n'uche njirimara nke otu ikpe.
Ọgwụgwọ nkwonkwo ikpere na ọgwụgwọ ndị mmadụ
Ruo ọtụtụ narị afọ, ndị na-agwọ ọrịa ọdịnala agwọwo nkwonkwo nke ọma, gụnyere ikpere. A na-eji ọgwụgwọ eke dị mma eme ihe dị ka mgbakwunye na nke bụ isi, ma ọ dịghị ihe ọ bụla dochie ya. Tụkwasị na nke a, enwere ike iji usoro ntụziaka ndị ọzọ naanị mgbe nkwenye nke dọkịta na-aga.
Mmanya tincture mmanụ aṅụ
A maara mmanụ aṅụ maka ọgwụgwọ ya kemgbe oge ochie. Mmanụ aṅụ mmanụ aṅụ nwere mmetụta analgesic na mgbochi mkpali na-eji mgbe niile. Naanị ihe mgbochi maka iji mmanụ aṅụ maka ọgwụgwọ ikpere bụ ohere nke mmeghachi omume nfụkasị ahụ.
Iji kwadebe tincture, ịkwesịrị itinye teaspoons abụọ nke mmanụ aṅụ na milliliters iri nke mmanya ọgwụ n'ime akpa. Debe ngwakọta a na-esi na ya pụta na mmiri ịsa mmiri ruo mgbe agbazere kpamkpam. Tinye ihe ngwọta jụrụ oyi na mpaghara ikpere n'ụtụtụ na mgbede, iji mee ka mmeghachi omume dịkwuo mma, ị nwere ike ịmepụta mmetụta mkpakọ na ihe nkiri nri.
A ga-egbutu yabasị ọhụrụ ka ọ bụrụ steeti mushy wee gwakọta ya na obere shuga granulated. Debe ngwakọta a na-esi na ya pụta n'ụdị achịcha dị elu otu na ọkara centimita ma tinye ya na nkwonkwo mgbu maka awa iri na abụọ. Eyịm ga-eme ka ikpere na-egbu egbu ma nwee mmetụta mgbochi mkpali.
Na-asachapụ site na bile ahụike
Ndị dọkịta na-atụ aro ka a na-ete bile ahụike na-ekpo ọkụ n'ime nkwonkwo ọrịa iji belata mgbu. Enwere ike zụta ọgwụgwọ dị ọnụ ala mana dị irè n'ụlọ ahịa ọgwụ na-enweghị ndenye ọgwụ dọkịta. Na mgbakwunye na mmetụta analgesic, bile na-eme ka mgbasa ọbara dịkwuo mma ma kwụsị mbibi nke anụ ahụ na nkwonkwo.
Iji gbochie ihe mgbu na ikpere, ị ga-agbaso iwu mgbochi dị mfe:
chọọ enyemaka ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na mgbaàmà nke usoro pathological na nkwonkwo pụtara;
nyochaa ibu nke gị;
Nri dị mma;
ibi ndụ na-arụsi ọrụ ike;
jiri bandages orthopedic iji gbochie mmerụ ahụ;
emela ọgwụ onwe gị.